जनतालाई घरभित्रै थुनेर मन्त्रीलाई तलब खुवाउन कर तिर भन्न सुहाउँछ अर्थमन्त्रीज्यू ? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Economic News/जनतालाई घरभित्रै थुनेर मन्त्रीलाई तलब खुवाउन कर तिर भन्न सुहाउँछ अर्थमन्त्रीज्यू ?
ठमाडौं । विश्व मानव अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्षरत छ । विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि संसारभरका सरकार प्रयासरत छन् । नेपाल पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जुधिरहेको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण नफैलियोस् भनेर विश्वभरका देशले जस्तै नेपालले पनि लकडाउन गरेको छ ।
तर, यसको भोलिपल्ट मंगलबार अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सबै आयकर दाखिला जेठ २५ गतेभित्रै गर्न आह्वान गरेको छ । लकडाउनले सबै उद्योग व्यवसाय ठप्प छन् । मानिसले काम पाएका छैनन् । भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । तर, सरकारले रातह दिनुको सट्टा कर बुझाउन निर्देशन दिएर कोरोना म हामा रीका बेला जनतालाई आहत दिएको छ ।